Sawirro: Qaxootiga oo noolashooda caadi u wato in kasta oo la sheegay in la celin doono - BBC Somali
Sawirro: Qaxootiga oo noolashooda caadi u wato in kasta oo la sheegay in la celin doono
22 Nofembar 2013
Qaxootiga oo noolashooda caadi u wato in kasta oo la sheegay in la celin doono
Ganacsiga ayaa caadi uga socda xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab in kasta uu jiro heshiis ay gaareen Kenya, Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay oo ah in la celiyo qaxootiga doonayo inay noqdaan.
Ninkan waxaa uu iibinayaa qaadka oo aad looga cuno xeryaha qaxootiga. Dadka ka ganacsada xeryaha qaxootiga ayaa ka walwalsan ganacsigooda haddii qaxootigu noqdaan.
Ninkan waxaa uu ku shaqeystaa dameerkan, dadka noociisa ah waxay is weydiinayaan waxa ugu horreeya Soomaaliya haddi ay noqdaan.
Qudaarta ayaa si weyn looga helaa xeryaha qaxootiga. Kaddib 23 sano oo qaxootigu ku noolaayeen Dhadhaab, inta badan dhallinyarada halkan ku dhalaay ma garanayaan guri kale oo aan ka ahayn xeryahan qaxootiga.
Qaxootiga ayaa noolashooda caadi u wato. Inta badan kama muuqato wax walwal ah oo ku saabsan in la celin doono. Heshiiska saddex geesoodka ah ayaa sheegayo in muddo saddex sano lagu celin doono qaxootiga doonayo inay noqdaan.
Xeryaha qaxootiga waxaa ku nool ku dhawaad nus malyuun ruux oo u badan Soomaali. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegaysa in 100 ruux oo kaliye ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay noqdaan.
Ma jiraan wax astaamo oo muujinayo in qaxootigu isu diyaarinayaan inay noqdaan. Noolashooda ayay caadi u wataan.